विशेष के छ त यो भिडियोमा ? जुन भिडीयो ७० लाख बढीले हेरे ! (उक्त भिडीयो हेर्नुहोस्)
October 7, 2020 2978
पछिल्लो समय मानि’सहरुमा भि’डियो शेयरिङ मोबाइल एप टिकटकको लोकप्रियता बढी नै छ । छोटो भि’डियो लिपसिङ सेयरिङ्ग एप टिकटकमा भि’डियो अपलोड गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभिन्न किसिम’बाट बनाइएका टिकटक भि’डियो तीव्र रुपमा सामा’जिक सञ्जालमा भाइरल भइहाल्छन् ।
यस्तै एउटा भिडियो अहिले भाइर’ल भएको छ । उक्त टिकटक भिडियोमा एक युवतीले नृ,त्यु गरिरहेकी हुन्छिन् । उनको नृ,त्यका का,रण उक्त टिक`टक भिडि’योले चर्चा पाएको नभइ भिडियोमा देखिएको एउटा दृश्यले सबैको ध्यान तान्नु’का साथै चकित पारेको छ ।
विशेष के छ त भिडियोमा ??
भान्सा कोठा’मा ती युवतीले नाचेको भि’डियो बना’उँदै गर्दा उनको पछाडि रहेको सि’सामा एक छायाको दृश्य देखिन्छ । उक्त दृश्यलाई भूत भएको बताइएको छ । भि’डियोमा देखिएको उक्त छा’याको दृश्यका कारण ती युवती पनि त्रसि’त देखिन्छिन् ।
भि’डियो अप’लोड गर्दै ती युवतीले ले’खेकी छन् ‘यो भिडियोमा म एक्लै छैन । मरो साथमा यहाँ अरु कोही पनि छन् । तर, मलाई थाहा छैन को छ भनेर ।’ यो भिडियोलाई ७० लाख’भन्दा बढीले हेरेका छन् ।
इन्टरनेट प्र’योग गर्ने हरेक उमेर’का मानिसहरु अहिले एउटा चिनियाँ एपमा झुम्मिएका छन् । टिकटक एपमा पृष्ठभूमिको आवाजमा ओठ चलाएर १५ सेकेण्ड सम्म’को आफ्नो भि’डियो बनाएर अपलो’ड गर्नेहरुको संख्या करोडौं पुगेको छ ।के हो टिक टक ?
टिक टिक एक सोसल मि’डिया एप्लिकेसन हो । जस’का माध्यमबाट स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले छोटा छोटा भिडियो (१५ सेकेण्ड सम्मका) बनाएर शेयर गर्न सक्दछन् । भिडियो हेर्नुहोस
Prevरत्नपार्कका युवा बस ड्राइभर सुजन र रचना रिमालसँग गाएको गीत भाईरल (भिडियो हेर्नुस)
Nextआज असोज २२ गते (अक्टोबर ८) बिहिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
भुवनले १० करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेपछि साम्राज्ञीले दिईन् यस्तो प्रतिक्रिया (भिडियो)
‘नयाँ जीवनका पानामा भुल्दैछु म’ भन्दै श्वेताले सार्वजनिक गरिन् बिजयन्द्रसंगका यी १० तस्बिर
घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु`होस्
दिलीप रायमाझीको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस्